Diploma - Ọkachamara Geospatial - Geofumadas
Diploma - Ọkachamara Geospatial
Jenụwarị, 2021 AulaGEO Diplomas
A na-eji usoro a eme ihe maka ndị ọrụ nwere mmasị n'ọhịa nke Geographic Information Systems, ndị chọrọ ịmụ ngwaọrụ na ụzọ dị iche iche. N'otu aka ahụ, nye ndị chọrọ imeju ihe ọmụma ha, n'ihi na ha na-ahụkarị sọftụwia ma chọọ ịmụta iji jikọta ozi gbasara ọnọdụ ya na usoro dị iche iche nke nnweta, nyocha na ị nweta nsonaazụ maka nyiwe ndị ọzọ.
Mepụta ikike maka inweta, nyocha na ịchụpụ data mpaghara. Usoro a gụnyere ịmụ ArcGIS Pro na QGIS, mmemme a kacha eji eme ihe na mbara igwe; yana iji ngwa ọrụ ejiri ozi rụọ ọrụ na ọzụzụ ndị ọzọ dịka Blender na Google Earth. Na mgbakwunye, ọ gụnyere modulu iji mụta otu esi akwadebe nsonaazụ iji bipụta na ịntanetị.
Enwere ike iwere ihe nkuzi n’adabereghị, na-anata diplọma maka usoro agụmakwụkwọ ọ bụla manaUlo akwukwo ndi okacha amara nke geospatial»Na-enyefe naanị mgbe onye ọrụ ewerela usoro ọmụmụ niile na njem.
Uru nke itinye n'ọrụ na ọnụahịa nke diplọma - Ọkachamara Geospatial
ArcGIS Pro nke mbụ ………………………… USD 130.00 24.99
ArcGIS dị elu …………………………. USD 130.00 24.99
Sayensị data ……………………………………… 130.00 24.99
GIS weebụ + Arcpy …………………………… .. .. USD 130.00 24.99
QGIS ……………………………………………………… 130.00 24.99
Blender - ịme ngosi obodo ………. USD 130.00 24.99
Previous Post«Previous Lomalọma - 3D ọkachamara nyocha
Next Post Ubre - Ala na-arụ ọrụ ọkachamaraNext »